Nagarik News - नेपाल पोलियोमुक्त घोषित हुँदै
काठमाडौं-विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नेपाललगायत दक्षिणपूर्वी एसियाका ११ देशलाई बिहीबार पोलियोमुक्त घोषणा गर्दैछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिल्लीमा विशेष समारोह आयोजना गरी सम्बन्धित देशका प्रतिनिधि (स्वास्थ्यमन्त्री) लाई पोलियोमुक्त देश घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछन्।
लगातार तीन वर्ष पोलियो नदेखिएका कुनै पनि देशलाई पोलियोमुक्त घोषणा गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ।
दक्षिणपूर्वी एसियामा नेपालमा गत फेब्रुअरी १२ मा पोलियो नभेटिएको तीन वर्ष पुगेको हो। भारतमा १३ जनवरी २०११ र नेपालमा ३० अगस्ट २०१० मा पोलियो भेटिएको थियो। दक्षिणपूर्वी एसियामा सबैभन्दा ढिलो पोलियोमुक्त हुने देश भारत र नेपाल नै हुन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पोलियोमुक्त देश घोषणा गरेलगत्तै नेपालले पोलियोयुक्त देशका पर्यटकमाथि कडाइ गर्ने भएको छ।
लामो प्रयासपछि पोलियोमुक्त भएपछि नेपालले आगामी दिनमा रोग पुनः देखापर्न नदिन सुरक्षाका लागि यस्तो निर्णय गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पोलियोमुक्त नभएका पाकिस्तान, नाइजेरिया र अफगानिस्तानबाट नेपाल आउने पर्यटकले अब त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएर मात्र प्रवेश पाउनेछन्।
बाल स्वास्थ्य महाशाखाले प्राविधिक पक्ष तथा कार्यान्वयन विधि तयार गर्न मंगलबारदेखि नै विज्ञसँग परामर्श थालेको छ। केही दिनभित्र प्रस्ताव तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमार्फत ती देशलाई जानकारी गराइने बाल स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले जानकारी दिए।
‘नेपाल पोलियोमुक्त भएको प्रमाणपत्र पाएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्र लेखी सम्बन्धित देशमा रहेका कन्सुलर एवं दूतावासमार्फत यस्तो जानकारी गराउनेछ,' डा. उप्रेतीले भने।
विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै स्वास्थ्य जाँच डेक्स राख्नेछ।
सातामा तीनवटा सिधा उडान भएकाले पाकिस्तानबाट नेपाल आउनेलाई बढी कडाइ गरिनेछ। नाइजेरिया र अफगानबाट आउने भारत भएर आउने हुँदा उहीँ जाँच हुने भएकाले नेपालमा पनि जाँच गर्ने–नगर्नेबारे यकिन भइसकेको छैन।
चिकित्सकका अनुसार शरीरमा पोलियो भाइरस भएका ५ प्रतिशतमा मात्रै पोलियो देखापर्छ। पोलियो भाइरस भएको मान्छेले समुदायमा रोग फैलाउन सक्छ। दिसा र पानीबाट यो भाइरस सजिलै फैलिन्छ।
संक्रमणले अपांग नै बनाउने यो रोग उन्मूलनका लागि नेपालमा सन् १९८८ देखि ७५ वटै जिल्लामा बालबालिकालाई नियमित खोप कार्यक्रम चलाइएको थियो। अभियान सञ्चालन गरेको १७ वर्षपछि नेपाल पोलियोमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको हो। यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय टोली आएर तीन वर्षदेखि नयाँ केस नभेटिएको प्रमाणीकरण गरिसकेको छ।
यसबाहेक सरकारले १७ वर्षदेखि वर्षमा दुईपटक पोलियो थोपा खुवाउने विशेष अभियान चलाउँदै आएको छ। हालसम्म सरकारले ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नियमित खोप कार्यक्रमबाहेक ३० चरणमा पोलियो थोपा खुवाइसकेको छ।
२५ वर्षअघि सन् १९८८ मा सम्पन्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको साधारण सभाले विश्वबाट पोलियो रोग उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो जतिबेला संसारका १२५ मुलुकमा पोलियो रोगका बिरामी भेटिएका थिए।
अमेरिकालगायत विकसित देशमा २० वर्षअघि नै पोलियो उन्मूलन भएको थियो। सन् २०१३ मा तीन वटा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नाइजेरियामा मात्र यो रोगको महामारी बाँकी छ।